अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइयो । विभागलाई कानूनी तथा साङ्गठानिकरुपमा समेत थप सवल बनाइयो । जसका कारण पछिल्ले पटक डेढ वर्षका अवधिमा रु १५ अर्ब कर छली गरेको अभियोगमा ५०६ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कर प्रणालीभित्रै जालसाझी गरेर बैंकिङ् प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर कारोबार नै भएजस्तो देखाएर कुनै कारोबार नगरी राज्यको खल्तीमा भएको पैसा निकालेर आम उपभोक्ताले तिरेको राजस्व बाँडडीचुँडी खाएको देखियो । न्यून आर्थिक अवस्था भएको व्यक्ति तथा कामदारका नाममा फर्म दर्ता गराउने दुुई चार हजार दिएर, चिटिक्क परेका टाइसुट लगाएको फोटो खिचाएर फर्म दर्ता गर्ने, बैंकमा लगेर खाता खोल्ने, चेक दस्तखतको अधिकार दलालले लिने गरेको देखियो । एकै पटक दर्जनौं फर्म दर्ता गर्ने अनि प्रेसमा विल छापेर जसलाई जे चाहिन्छ विल बेचेर कमिसन खानेपनि भेटियो । अहिले पनि भ्याट पनि तिर्न नपर्ने तथा २५ प्रतिशत आयकर पनि खर्च दावी गरेर तिर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । १५० बढी विलविजक मात्रै जारी गर्ने फर्म पहिचान, एक हजारभन्दा बढी विल खरिद गर्नेहरु नै फेला परेको र विल बिक्री गर्ने ५० भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइएको छ । विगत १० वर्ष अघि पनि मसमेत संलग्न भएर अनुसन्धान गरेका थियौँ, हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले ठिक हो भनेर ठहर्याएको छ ।
मिलेमतो नै त होइन । त्यतर्फ ध्यान नदिएको भने हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि हेर्न सकेन । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि हेर्न सकेन । त्यसकारण त्यो प्रवृत्ति दोहोरियो । १० वर्ष अघि जुन घटना भएको थियो, फेरी दोहोरियो । २०७० सालबाट त्यस्तो घटना २०७५ सम्म अत्याधिक भयो । तर, अब अहिले छैन । एक डेढ वर्षदेखि अब तपाई खोजेर पनि पाउनुहुन्न । नक्कली भ्याट बिक्री गर्ने गिरोह अहिले जेलमा छन् । अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको छ, भ्रष्टाचारको स्रोत बन्द भएको छ ।
विभागले दायर गरेको मुद्दा सतप्रतिशत सफल हुन्छ । किन भने हामीले तथ्य, प्रमाण र कानुनको आधारमा विधि प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै लगिएको छ । हामीमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसमा हामीले लगेको मुद्दा कानूनका विज्ञ सरकारी वकिलले पनि हेरेर ठिक छ भनेर अगाडि बढाएको मुद्दा हो ।
व्यक्तिको प्रवृत्ति अर्काको पैसा पनि आफ्नो खल्तीमा आएपछि आफ्नो सम्झिने रहेछ । भ्याटको सिष्टम के हो भने त्यो करदातालाई भ्याट सङ्कलन गरेर एक महिनाको पैसा तपाईं चलाउनुस् र्निब्याजी । त्यसपछि अर्को महिनाको २५ गते भित्रमा चाहीँ राज्य कोषमा जम्मा गर्नुस् । तपाईँले हर हिसाब राखेबापत उठाएको रकमको ब्याज तिर्नु पर्देन भनेर उसलाई कर अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । तर, उ त्यो पैसाको लोभमा लाग्यो । सरकारको कोषमा त्यो पैसा किन जम्मा गर्ने भन्ने भावना विकास भएर यस्ता गतिविधि गरेको देखियो ।
ठूला, साना भन्ने विषय नै भएन । तपाईँलाई भ्याटमा दर्ता भएर अनुमति दिनु भनेको कर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । त्यसको दुरुपयोग गर्यो भने दण्डसजायको व्यवस्था पनि कडा छ । शतप्रतिशत जरिवाना हुन्छ । ब्याज, थप दस्तुर लाग्छ । व्यवसायीले गलत नगरोस् है भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो । अब उसले जानी बुझी गर्छ भने ऊ दण्डित पनि हुन्छ । हामीले छानविन, अनुसन्धान गरेर कर निर्धारण गरेको १० वर्षपछि टुङ्ग्यो लाग्यो भने अब १० वर्षदेखिको ब्याजसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय मर्दैन भन्ने भएको छ । त्यसकारण हरेक सामान किन्दा बिल लिनुपर्यो, बिलै नलिएपछि त त्यो पैसा राज्यमा जाँदैन । बिल नलिइकन तिरियो भने त्यो पैसा राज्यलाई होइन साहू महाजनलाई तिरियो ।
यहाँले पटकपटक जोड दिएर भन्नुभयो, मसमेतको अनुसन्धानले १० वर्ष अघिको मुद्दा हालै सर्वोच्चले फैसला गर्यो, अब यही नेर भनिदिनोस् की विगतमा चर्चामा रहेका ठूला औद्योगिक घरानाले छलेको भनिएको भ्याटको समेत फाइल खुल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
विदेशी विनिमयको समग्र व्यवस्थापन, नीति निर्देशन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । विदेशी विनिमय अपचलन भयो भने विभागले अनुसन्धान गर्छ । हुण्डीको कारोबार भनेको राजस्वसँग पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित छ । यथार्थ मूल्यमा कारोबार नहुने, भन्सारमा कम मूल्याङ्कन हुने, अनि त्यो पैसा अवैध माध्यमबाट भुक्तानी हुने अवस्थाले हुण्डी सिर्जना हुन्छ । जब यथार्थ कारोबार घोषणा हुने अवस्था आयो भयो भने हुण्डी कारोबार घट्छ । हामीले जति राजस्व चुहावटमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ । त्यसले हुण्डी कारोबार घट्दै गएको छ । विप्रेषण आयलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा नीतिगत सुधार हुनु जरुरी छ ।
मलाई लाग्दैन, विभागले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर जुन परिणाम देखाएको छ, त्यसमा साना ठूला भन्ने छैन । ठूलो चुहावटलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । करोडौँ राजस्व चुहावट गर्ने ‘साना माछा’ हो र भन्या ? बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी १० अर्बको कारोबार गर्ने सानो हो र ? भाटभटेनी सानो हो र अरु पनि अर्बौँका छन् । राजस्व चुहावटको कसूरमा सानो भन्ने त कुरै भएन । सानाले ठूला चुहावट गर्नै सक्दैनन् । ठूलाले नै अधिक चुहावट गर्छन् । विभागको कारबाहीले ठूलाले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । अहिले कर्मचारी तथा पत्रकार पनि कारबाहीमा परेका छन् । कुनै आवरणमा कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन । उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा विभागको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
https://www.corporatenepal.com/2020/01/161641/ ४ माघ २०७६, शनिबार